တခြို့လမျးခှဲခွငျးတှကေ ပိုကောငျးဖို့ဖွဈလာတာပါ … – Shinyoon
တခြို့လမျးခှဲခွငျးတှကေ ပိုကောငျးဖို့ဖွဈလာတာပါ …
April 23, 2021 by Shin Yoon
တှဆေုံ့ခွငျးတှေ ရှိတာတဲ့နောကျမှာ တခြို့ကတော့ တဈသကျလုံးမခှဲရပဲ လကျတှဲတှမွေဲတယျ တခြို့ကတော့ အလဲအကှဲနဲ့ လမျးတှခှေဲရတယျ … တှဆေုံ့ခွငျးတှကေို ခုံမငျခဲ့တာကိုး လမျးခှဲခွငျးတှကေိုလဲ နှဈသကျလိုကျရုံပေါ … ဒါပမေယျ့ တခြို့လမျးခှဲခွငျးတှကေတော့ ကိုယျကောငျးဖို့အတှကျ ဖွဈလာခဲ့တာပါ ..
ဘေးနားမှာ ရှိနပေမေယျ့လဲ အတှေးထဲမှာ ရှိမနတေဲ့ လူတဈယောကျအနားမှာ ရပျနရေခွငျးဟာ စကျရုပျလေးတဈရုပျကို ပိုငျဆိုငျထားရသလိုပါပဲ ကိုယျမေးတဲ့မေးခှနျးကိုမှ ဖွတေယျ ကိုယျအနားသှားမှပဲ သူ့အနားကို ရောကျတယျလေ … ဆကျဆံရေးတှဟောလဲ ကိုယျကိုယျတိုငျမှ နှေးထှေးအောငျ မလုပျနိုငျရငျ အရမျးကို အေးစကျတယျ ….
တခြို့ကပြွနျတော့လဲ ကိုယျ့ရှရေ့ောကျရငျ ကိုယျ့ကို သဲသဲလှုပျခဈြပွတယျ အဲ့တာကို တကယျအဟုတျကွီး ထငျပွီး မကျြစိမှတျယုံလိုကျမိတဲ့သူက အမှားပေါ့ … တခွားတဈယောကျနဲ့တှပွေ့နျတော့လဲ ကိုယျ့ကို ခဈြပွသလိုမြိုး သူမှ သိပျကို ဖွဈတယျ ကိုယျမကျြနှာလှဲလိုကျတာနဲ့ ကိုယျ့ကို မသှေ့ားပွီး ကွုံရာလူနဲ့ ပြျောတတျတဲ့ကွုံပြျောတှပေေါ့ … အစှဲအလမျးကွီးတဲ့သူကပဲ ထူးပွီး ရူးတယျ ။
ကိုယျ့ဆီက အခဈြကို အကုနျလိုခငျြပမေယျ့လဲ သူ့ဆီက ဘာမှ ပေးမလာတဲ့လူမြိုးတှလေဲ ရှိသေးတယျ ဂရုစိုကျတာ အလိုလိုကျတာ အခဈြခံခငျြတာ ဘာမဆို အားလုံးလိုခငျြပမေယျ့လဲ သူ့ဆီကကပြွနျတော့ ဘာဆိုဘာမှ ပွနျမပေးတဲ့ လူပေါ့ …
ဒီလိုလူမြိုးတှနေဲ့ လမျးခှဲခဲ့တယျဆိုတာ ကိုယျကောငျးဖို့အတှကျသကျသကျပါ မကျြရညျတှကေလြောကျတဲ့ထိ လှမျးဖို့ကောငျးမနခေဲ့ဘူး … သူမရှိတော့တဲ့နောကျမှာ သူမရှိတော့တာက လှဲရငျ ညတှမှော ငိုနစေရာမလိုတော့ဘူး … နတှေ့မှော ဘယျသူနဲ့တှနေ့မေလဲ စိတျပူနဖေို့ မလိုတော့ဘူး … ငါဘာမြားမှားလို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ ခေါငျးငုံ့နဖေို့မလိုတော့ဘူး
ဘယျတုနျးကမှ ပွနျမရခဲ့တဲ့ လှတျလပျမှုမြိုးသာ သူမရှိတဲ့နောကျမှာ ရခဲ့မယျဆိုရငျ ရဲရဲကွီး လှတျခပြေးလိုကျပါ … အရငျတုနျးက ကိုယျ့အတှကျ မမကျဖွဈတဲ့ အိပျမကျတှေ ကိုယျ့အတှကျ မကျပဈလိုကျစမျးပါတယျ … သူ့ကို ခဈြခဲ့တာရဲ့ ၁၀ပုံ ၁ ပုံလောကျ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျခဈြကွညျ့ပါ … လောကကွီးမှာ နခေငျြလာလိမျ့မယျ …
တခြို့လမျးခှဲခွငျးတှကေ ရစေကျကုနျသှားတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျဆပျရမယျ့ ဝဋျကွှေးတှေ ကုနျသှားခဲ့တာပါ ငိုမနပေါနဲ့တော့ … ကိုယျကောငျးဖို့အတှကျ ဒီလမျးခှဲတှေ ဖွဈလာတာပါ ..
တချို့လမ်းခွဲခြင်းတွေက ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါ …
တွေ့ဆုံခြင်းတွေ ရှိတာတဲ့နောက်မှာ တချို့ကတော့ တစ်သက်လုံးမခွဲရပဲ လက်တွဲတွေမြဲတယ် တချို့ကတော့ အလဲအကွဲနဲ့ လမ်းတွေခွဲရတယ် … တွေ့ဆုံခြင်းတွေကို ခုံမင်ခဲ့တာကိုး လမ်းခွဲခြင်းတွေကိုလဲ နှစ်သက်လိုက်ရုံပေါ … ဒါပေမယ့် တချို့လမ်းခွဲခြင်းတွေကတော့ ကိုယ်ကောင်းဖို့အတွက် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ..
ဘေးနားမှာ ရှိနေပေမယ့်လဲ အတွေးထဲမှာ ရှိမနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အနားမှာ ရပ်နေရခြင်းဟာ စက်ရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသလိုပါပဲ ကိုယ်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမှ ဖြေတယ် ကိုယ်အနားသွားမှပဲ သူ့အနားကို ရောက်တယ်လေ … ဆက်ဆံရေးတွေဟာလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှ နွေးထွေးအောင် မလုပ်နိုင်ရင် အရမ်းကို အေးစက်တယ် ….
တချို့ကျပြန်တော့လဲ ကိုယ့်ရှေ့ရောက်ရင် ကိုယ့်ကို သဲသဲလှုပ်ချစ်ပြတယ် အဲ့တာကို တကယ်အဟုတ်ကြီး ထင်ပြီး မျက်စိမှတ်ယုံလိုက်မိတဲ့သူက အမှားပေါ့ … တခြားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲ ကိုယ့်ကို ချစ်ပြသလိုမျိုး သူမှ သိပ်ကို ဖြစ်တယ် ကိုယ်မျက်နှာလွဲလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကို မေ့သွားပြီး ကြုံရာလူနဲ့ ပျော်တတ်တဲ့ ကြုံပျော်တွေပေါ့ … အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့သူကပဲ ထူးပြီး ရူးတယ် ။
ကိုယ့်ဆီက အချစ်ကို အကုန်လိုချင်ပေမယ့်လဲ သူ့ဆီိက ဘာမှ ပေးမလာတဲ့လူမျိုးတွေလဲ ရှိသေးတယ် ဂရုစိုက်တာ အလိုလိုက်တာ အချစ်ခံချင်တာ ဘာမဆို အားလုံးလိုချင်ပေမယ့်လဲ သူ့ဆီကကျပြန်တော့ ဘာဆိုဘာမှ ပြန်မပေးတဲ့ လူပေါ့ …
ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကောင်းဖို့အတွက်သက်သက်ပါ မျက်ရည်တွေကျလောက်တဲ့ထိ လွမ်းဖို့ကောင်းမနေခဲ့ဘူး … သူမရှိတော့တဲ့နောက်မှာ သူမရှိတော့တာက လွဲရင် ညတွေမှာ ငိုနေစရာမလိုတော့ဘူး … နေ့တွေမှာ ဘယ်သူနဲ့တွေ့နေမလဲ စိတ်ပူနေဖို့ မလိုတော့ဘူး … ငါဘာများမှားလို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ခေါင်းငုံ့နေဖို့မလိုတော့ဘူး
ဘယ်တုန်းကမှ ပြန်မရခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုးသာ သူမရှိတဲ့နောက်မှာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ရဲရဲကြီး လွတ်ချပေးလိုက်ပါ … အရင်တုန်းက ကိုယ့်အတွက် မမက်ဖြစ်တဲ့ အိပ်မက်တွေ ကိုယ့်အတွက် မက်ပစ်လိုက်စမ်းပါတယ် … သူ့ကို ချစ်ခဲ့တာရဲ့ ၁၀ပုံ ၁ ပုံလောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ချစ်ကြည့်ပါ … လောကကြီးမှာ နေချင်လာလိမ့်မယ် …
တချို့လမ်းခွဲခြင်းတွေက ရေစက်ကုန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ဆပ်ရမယ့် ၀ဋ်ကြွေးတွေ ကုန်သွားခဲ့တာပါ ငိုမနေပါနဲ့တော့ … ကိုယ်ကောင်းဖို့အတွက် ဒီလမ်းခွဲတွေ ဖြစ်လာတာပါ ..
ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျတတျတော့တဲ့ မိနျးမတဈယောကျအကွောငျး
သူနဲ့အတူဆိုပွီး အိပျမကျတှေ မကျခဲ့ပွီးမှ ကိုယျတဈယောကျတညျးဒီလမျးမှာ ကနျြခဲ့ရတယျ